Zinedine Zidane Oo Ronaldo Ka Saaray Xidigaha Wajihi Doona Leganes | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Published on February 21, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(21-2-2018) Tabababaraha kooxda Real Madrid Zinedine Zidane ayaa qorsheynaya in uu nasiyo ciyaariyahan Cristiano Ronaldo kulanka caawa ay la qaadan doonaan kooxda Leganes.
Ronaldo ayaa dhaliyay 10 gool waxaana loo diwaan galiyay 2 caawinaad 6 kulan ee ugu danbeysay dhamaan tartamasda, waxaana la aaminsanyahay in Ronaldo uu dib ugu soo laabtay qaab ciyareedka wanaagsan.
Si kastabaha ha’ahaatee Los Blancos oo difaacaneysa Laliga ayaa xiligan 17 dhibcood ka hooseysa kooxda Catalonia ka dhisan ee Barcelona, Zidane ayaana la fariisin doona laacibkiisa Ronald.
“ma garanayo inta sano ee adkeyd in la joojiyo Ronaldo , waa ciyaariyahan heer caalami mar waliba waa hogaamiyaha kooxda laakiin caawa wuxuu qaadan doonaa nasiino” Zidane ayaa sidaasi u sheegay Marca.
Nasiinada Ronaldo ayaa ka dhigan in Zidane uu doonayo sidii laacibka Portugal o oil gooni ah ugu yeelan lahaa ciyaarta xiisaha badan ee Champions League kooxdiisa ka hor tagi doonto Paris Saint Germain.
Kulanka caawa ee Los Blancos iyo Leganes ayaa qurshaha wuxuu ahaa in la ciyaaro kulamadii 16-aad ee Laliga laakiin kulankaasi ayaa dib loo dhigay, maadaama kooxda Zidane xiligaasi ay ka qeyb galeysay koobka kooxaha aduunka ee Club World Cup.